အပြာစာပေလေ့လာမှုတွင်အလွန်ထိန်းချုပ်ခြင်း - ၎င်းကိုသွားခွင့်ပြုပါ၊
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်သုတေသန၌ Overcontrol: Paul J. , Written by Go … (2021) Paul J.
Wright, PJ Arch လိင်ပြုမူနေ 50, 387-392 (2021) ။ https://doi.org/10.1007/s10508-020-01902-9
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အဲလ်ဆာရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးဆုံးမခြင်းရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြည့်ရတာအရေးကြီးတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုလို့မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။ ရေခဲသော ငါ့တူတွေ၊ တူတွေနဲ့ပါ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်သမီးငယ်လေး (တစ်နှစ်ကျော်ကျော်နှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်နားထောင်သူ) ကိုမျှော်လင့်နေပါသည် ရေခဲသော ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းကသီချင်းများ) သို့သွားခြင်း၏အရေးကြီးသောနိယာမကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမကြာသေးမီကဆောင်းပါး Kohut, Landripet နှင့် Stulhofer (၂၀၂၀) ကကျွန်ုပ်သည် "ထိန်းချုပ်မှု" ပြောင်းလဲခြင်း (S. ) အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသီများအားအလားတူအကြံပြုလိုကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။ ပယ်ရီ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေး, ဇွန်လ 2020, 26) ။ အထူးသဖြင့်ဤစာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသက်ရောက်မှုများသုတေသနတွင် (တတိယ variable များ၏အယူအဆကိုထင်သာမြင်သာထင်သာမြင်သာစွာထင်ဟပ်စေသောထင်မြင်ယူဆချက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနှုန်းခြင်း) အတွက်ရေပန်းစားသည့်ချဉ်းကပ်မှုအပေါ်“ လွှတ်ပေးရန်” နှင့်“ တံခါးကိုပိတ်ထားရန်” အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းသူ၊
ငါလက်ရှိချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူပြproblemsနာများစွာကိုဖော်ပြထားသည်။ ငါကိုယ်တိုင်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုအပြစ်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုအခြားသူများ၏လုပ်ငန်းကိုးကားခြင်းထက်ရည်ညွှန်းခြင်းထက်တိကျသောပုံဥပမာအဖြစ်စွဲချက်တင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Kinsey Institute ၏တွဲဖက်နှင့် Stulhofer (Milas, Wright, & Stulhofer, 2020; Wright & Stulhofer, 2019) နှင့်ပူးပေါင်းသူဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ဆောင်းပါးသည်ဤစာကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်သောကြောင့်ငါ Kohut et al ကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ ။ ငါ၏အအချက်များကိုသရုပျဖျောဖို့ရာနှင့်အတူတိကျတဲ့ဥပမာအဖြစ် (2020) ။ ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်သုတေသနအလေ့အကျင့်များကိုအားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမသိသောအခြားသူများထက်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများကိုအပြုသဘောဆောင်အကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုသုတေသနသည်မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုသုတေသန၏ကဏ္fieldခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သုံးစွဲသူများ၏ယုံကြည်ချက်များ၊ သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းရန်အရေအတွက်နည်းလမ်းများအသုံးပြုသည်။ (Wright, 2020a) ငါပုံမှန်ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (ဥပမာ, Wright, 2019, 2020a; Wright & & အတူအကျွမ်းတဝင် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ် ဦး စလုံးအတွက်နှစ် ဦး စလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ် ဦး စလုံး) ဖြစ်လာဖို့ပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းအကြံပြုရန်ခဲယဉ်းလိမ့်မည် Bae, 2016) နှင့် meta-analysis သည် (ဥပမာ, Wright & Tokunaga, 2018; Wright, Tokunaga, & Kraus, 2016; Wright, Tokunaga, Kraus, & Klann, 2017) ။ ထိုကဲ့သို့သောစာပေပေါင်းစပ်မှုများမှတစ်ဆင့် (၁) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များမှလေ့လာခဲ့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာမှုများကိုစစ်တမ်းနည်းစနစ်များဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ (၂) သုတေသနပြုချက်တွင်ဤလေ့လာမှုတွင်အဓိကအားဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုရှိမရှိမေးမြန်းရန်ဖြစ်သည်။X) သည်ယုံကြည်မှု၊ သဘောထား၊ အပြုအမူအချို့နှင့်ဆက်နွယ်နေဆဲဖြစ်သည်။Y) ကစာရင်းအင်း "ထိန်းချုပ်မှု" variable တွေကိုတစ်ခုအစဉ်အဆက်တိုးပွားလာခြင်းနှင့်ပို။ ပို။ ပိုင်ထိုက်သောစာရင်းများအတွက်ညှိပြီးနောက် (Zကြော်ငြာ infinitum).
လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၊ အပျိုဖော်ဝင်အနေအထား၊ အသက်၊ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ ကျားမ၊ ပညာရေး၊ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးစာသားများ၏သဘောထားအမြင်များ၊ စောင့်ရှောက်သူများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများဖြစ်သည်။ လိင်မှုကိစ္စ၊ လူမျိုးရေးလက္ခဏာ၊ လူမှုရေး၊ စိတ်ကျဝေဒနာ၊ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ PTSD လက္ခဏာများ၊ ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု၊ သက်တူရွယ်တူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှု၊ ရွယ်တူချင်းများ၊ မိဘများနှင့်တွဲဖက်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်း၊ မိဘထိန်းချုပ်မှု၊ ရွယ်တူချင်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၊ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ လိင်စိတ်ခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၊ မိသားစုနောက်ခံ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခိုင်အမာပြောဆိုမှု၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ တေးဂီတဗီဒီယိုကြည့်ခြင်း၊ ဘာသာရေးဆက်နွယ်မှု၊ ဆက်ဆံရေးအရှည်၊ လူဝင်မှုနောက်ခံ၊ ကြီးမားသောနေရာတွင်နေထိုင်ခြင်း y၊ မိဘအလုပ်အကိုင်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ခိုးမှုသမိုင်း၊ ကျောင်းပြေးခြင်း၊ ကျောင်းပြproblemsနာများ၊ လိင်ပွဲ ဦး ထွက်သက်တမ်း၊ ချိန်းတွေ့ခြင်းလှုပ်ရှားမှု၊ လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်း၊ စမ်းသပ်မှုများကိုလိမ်လည်ခြင်း၊ လူမှုနှိုင်းယှဉ်မှု ဦး တည်ချက်၊ နေထိုင်ရာပထဝီအနေအထား၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ကျေနပ်မှု၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုအစဉ်အဆက်ရှိကလေးအရေအတွက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဘာသာရေးမိတ်ဆွေအရေအတွက်၊ လွန်ခဲ့သောအပတ်ကလိင်မှုအကြိမ်ရေနှင့်အထက်တန်းလွန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်ကျောင်းအပ်ခြင်း။
လက်ရှိချဉ်းကပ်မှု၏အခြေခံ (ထင်မြင်ချက်) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လူမှုရေးလွှမ်းမိုးမှု၏အမှန်တကယ်အရင်းအမြစ်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မဟုတ်ဘဲအချို့သောတတိယပုံစံသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှု၊ သဘောထား၊ စာရေးသူအနည်းငယ်ကမူထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသော variable တစ်ခုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လေ့လာမှုရလဒ်များကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ယေဘူယျအားဖြင့် (တစ်ခါတစ်ရံအကိုးအကားများဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံမပါဘဲ) အထွေထွေကြေငြာချက်တစ်ခုသည်ကြိုတင်သုတေသနပြုထားသည့်ကိန်းရှင်များကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှုပ်ထွေးမှုအဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့တွင်ထည့်သွင်းရခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားအချိန်များတွင်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုစာရင်းပြုစုရန်အတွက်မည်သည့်ရှင်းပြချက်မျှပေးသည်မဟုတ်ပါ။ တိကျသောသီအိုရီဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းကိုအတည်ပြုသည့်လေ့လာမှုများကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ လေ့လာမှုများကိုခန့်မှန်းသူများ၊ ဖျန်ဖြေသူများသို့မဟုတ်မော်ဒကဲသမားများထက်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ပုံစံပြုထားသည်ကိုတရားမျှတသောလေ့လာမှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ရှားပါးသည် (ကျွန်ုပ်ဤသို့တစ်ခါမှမမြင်ဖူး) ။
ကတိထားသည့်အတိုင်းငါသည်လည်းငါလေ့လာမှုများအများအပြားအတွက် underjustified ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဘက်ထရီပါဝင်သည်ဝန်ခံ။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် Wright and Funk (2014) တွင်“ ကြိုတင်သုတေသနပြုခြင်း” သည်၎င်းတို့အတွက်“ ထိန်းချုပ်ခြင်း၏အရေးကြီးပုံ” ကိုဖော်ပြသည်ဟူသောဖော်ပြချက်ထက်ပိုမိုသောအကြောင်းပြချက်မရှိသောထိန်းချုပ်မှု ၇ ခုကိုထည့်သွင်းထားသည် (စ။ ၂၁၁) ။ အခြားဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်၊ Tokunaga, Wright နှင့် McKinley (၂၀၁၅) တွင်ကျွန်ုပ်သည် control variable ၁၀ ခုပါဝင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းတို့သည်“ ယခင်သုတေသနတွင်” (စ။ ၅၈၁) တွင်ဖော်ပြထားသော“ ဖြစ်နိုင်ခြေရှုပ်ထွေးသော variable များ” ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကာကွယ်ရေးတွင်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည်ဤပြောင်းလဲမှုများကိုအကြံပြုခဲ့သော“ ကြိုတင် / ယခင်သုတေသန” ကိုကိုးကားခဲ့သည်။
အပြာအရဆိုလျှင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသက်ရောက်မှုများသုတေသနရှုခင်းကိုစုစုပေါင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါထိန်းချုပ်မှုများပါ ၀ င်ခြင်းသည် idiosyncratic၊ ကိုက်ညီမှုမရှိ၊ ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက်မှာသုတေသီများတွင်ကြိုတင်သုတေသီများတွင်ထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သည်၊ အယ်ဒီတာများသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်သူများက၎င်းသည်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည် (Bernerth & Aguinis, 2016) သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည် "နည်းစနစ်ဆိုင်ရာမြို့ပြဒဏ္legာရီ" ၏သားကောင်ဖြစ်သွားသောကြောင့်၊ ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုမပါဘဲထက်အမှန်တရားပိုမိုနီးကပ်စွာ "(Spector & Brannick, 2011, p ။ 296) ။ အစောပိုင်းကျွန်ုပ်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုတွင်ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းသိသည်။
ပြောင်းလဲနိုင်သောပါဝင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်“ မီးဖိုချောင်မှ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံး မှလွဲ၍ အရာအားလုံး” မှပြproblemsနာများမှာ (Becker, 2005, p ။ 285) ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသက်ရောက်မှုများတွင်စာပေများထိန်းချုပ်မှုကိုအများဆုံးအသုံးပြုသောအချက်မှာ -
စစ်မှန်သောကှဲလှဲညစ်ညမ်း - ရလဒ်ကိုဆက်စပ်မှု (Becker က, 2005) မှ partialled ခံရကြောင့်အမျိုးအစား II ကိုအမှား၏အခွင့်အလမ်း။ Becker က အကယ်၍ ထိန်းချုပ်မှုများသည်ခန့်မှန်းသူနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်း၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါက I အမျိုးအစားအမှားအယွင်းများမြင့်တက်နိုင်သည်ဟုလည်းမှတ်ချက်ပြုသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသက်ရောက်မှုစာပေတွင်ပြaနာတစ်ခုအဖြစ်သတိမထားမိပါ။ မေးခွန်းသည်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ - ရလဒ် bivariate ဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ထိန်းချုပ်မှုရှိမရှိအမြဲဖြစ်သည် Zad infinitum ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်အမှန်တကယ်ရှိခဲ့သော“ ရှေးဟောင်းအခြေအနေများ - အကျိုးသက်ရောက်မှုများ” လုံးဝပျောက်ဆုံး။ သို့မဟုတ်နားလည်မှုလွဲမှားရန်အခွင့်အလမ်းသိသိသာသာတိုးပွားလာသည် (Campbell & Kohut, 2017, p ။ 8) ။ အသိပညာ၏တိုးတက်မှုရပ်တန့်ပေမယ့်အခါကှဲလှဲတတိယ - variable ကိုအဖြစ်မှန်အတွက် ponography သက်ရောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် (Spector & Brannick, 2011) တွင်ခန့်မှန်း, ဖျန်ဖြေ, ဒါမှမဟုတ်မော်ဒယ်သောအခါ "ရှုပ်ထွေး" မှစွပ်စွဲအခါတိုင်းကှဲလှဲမသာ obfuscated ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းပြချက်ကြောင့် Meehl (၁၉၇၁) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသက်ရောက်မှုစာပေ (ဆိုလိုသည်မှာအပြည့်အစုံထိန်းချုပ်မှုများအဖြစ်ပုံစံပြုခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများ၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းသူများသို့မဟုတ်သုံးသပ်သူများမှ) ၏လက်ရှိချဉ်းကပ်မှုအား“ လုံးလုံးလျားလျားဒုစရိုက်” အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ မှားသောအခြ "(စ။ 1971) ။
ဤပြproblemsနာများသည်တစ်ခါတစ်ရံတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပိုဆိုးစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ ဖျန်ဖြေသူဆိုသည်မှာထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ပုံစံပြုပါကလုပ်ငန်းစဉ်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသည်ယခုအခါတိုးများလာနေသောတရားမဝင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးအစား ၂ အမှား၏အခွင့်အလမ်းကဲ့သို့တိုးပွားလာသည်။
ဘာသာရေးနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်အဓိကဥပမာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသက်ရောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိပါက၎င်းထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေရှုပ်ထွေးမှုများအဖြစ်ဤပြောင်းလဲမှုများကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ပယ်ရီ (2017, 2019; Perry & Hayward, 2017 ကိုလည်းကြည့်ပါ) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်ဘာသာတရား၏ကျဆင်းမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောနမူနာများအားလုံးတွင် longitudinal လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်အပေါ်အပန်းဖြေသောအပြုအမူများ (ဥပမာ၊ Peter & Valkenburg, 2006) အကြားရှိဘာသာတရားများကိုရှုပ်ထွေးစေမည့်အစား၊ ဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သည် (အပြာစာပေဘာသာတရားသည်ဘာသာရေးအရကျဆင်းခြင်း→အပန်းဖြေခြင်းလိင်အပေါ်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောသဘောထားများ) ။
အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ရလဒ်ဆက်စပ်မှုများကိုသာရှုပ်ထွေးစေနိုင်သောမပြောင်းလဲနိုင်သောအရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ခွင့်ပြုချက်ရထားသောဇာတ်ကြောင်းသည်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစားသုံးခြင်းနှင့် (ဤတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ရလဒ်ကိုထည့်သွင်းခြင်း) ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောကြောင့်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ အဆိုပါပင်ကိုယ်မူလစံချိန်သို့သော်မဟုတ်ရင်အကြံပြုထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ဘုံ၌ Stoolmiller, Gerrard, Sargent, Worth နှင့် Gibbons (2010) သည်သူတို့၏လေးလှိုင်းရှိနှစ်နှင့်ချီ။ နှစ်ရှည်လများလေ့လာမှုတွင် R-rated ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းကနောက်ပိုင်းတွင်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် R-rated ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါဘူး။ Stoolmiller et al ။ သူတို့၏ရလဒ်များသည် (အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှာဖွေခြင်းအပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပင်ကိုယ်သက်သေအထောက်အထားများကိုပေးသည်) (စ။ ၁) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုအာရုံစိုက်သောဤအချက်အလက်များ၏နောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကလိင်အကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းတွင်တိုးလာမည်ဟုခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (အလှည့်၌အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (O'Hara, Gibbons, Gerrard, Li, & Sargent, 1) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနယ်ပယ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်ဆိုင်ရာကျွန်ုပ်တို့၏မကြာသေးမီကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အာရုံခံစားမှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု (သို့) ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းရှိမရှိကိုအတိအလင်းစစ်ဆေးခဲ့သည် (Tokunaga, Wright, & Vangeel, 2012) ။ ဒေတာများသည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသဘောတရားအယူအဆကိုထောက်ခံသည်။
လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှုပ်ထွေးစေသည်ဟုယခင်ကရှိခဲ့သောလိင်သဘောထားများကယူဆကြသည်။ သို့သော်အမျိုးသားအဆင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အတိုင်းအတာလေးမျိုး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအတိုင်းအတာနှစ်ခု၊ လိင်စိတ်သဘောထား ၂ ခုနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှစ်မျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်လိင်စိတ်သဘောထားသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမရှုပ်ထွေးစေကြောင်း၊ သူတို့က (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ→လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ→လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ) (Wright, 2020b) ကသူတို့ကိုဖျန်ဖြေပေးခဲ့သည်။ အလားတူစွာကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်စာပေများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်သဘောထားများ (ဥပမာ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်သဘောထားများကိုဖျန်ဖြေသူ) မှတစ်ဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်အပြုအမူကိုခန့်မှန်းသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုများသည်လိင်သဘောထားများကြောင့်ရှုပ်ထွေးသွားသည်ဟူသောခန့်မှန်းချက်အတွက်သက်သေအထောက်အထားမတွေ့ရပါ (Tokunaga, Wright, & Roskos, 2019) ။
သို့သော်အချို့သော variable များဥပမာ demographics သည်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုသာဖြစ်ရမည်။ ငါ "လူ ဦး ရေအချိုးအစား" variable တွေကိုဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ခံရဖို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသက်ရောက်မှုများကိုစာပေတွင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ယူမှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအချက်အလက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုသတိပြုမိခြင်းနှင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအတော်လေးရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများသည်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမည်သို့ပုံဖော်သည်ကို Giano's (2019) မှလေ့လာခဲ့သူတစ် ဦး ကဖော်ပြခဲ့သည်။
ငါလိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်သွားပြီးလိင်ဆက်ဆံသူအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ခဲ့လျှင်ငါဖွင့်မဖြစ်သင့်စဉ်းစားသတိရ, ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီဟာဟာတကယ့်အစစ်အမှန်ပဲ၊ ငါကဂေးပဲ။ ဒါဟာအညီအမျှစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ကြောက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ (စ။ ၈)
အလားတူစွာ၊ Bond၊ Hefner နှင့် Drogos (2009) တို့က“ မတိုင်မီကထွက်ပေါ်လာသောလူငယ်ယောက်ျားများသည်သူတို့၏လိင်တူခံစားချက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်” (စ။ ၃၄) တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
အချုပ်အားဖြင့်လက်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများမှထိန်းချုပ်မှုကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်အတူ (၁)“ စွမ်းအင်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အမျိုးအစား ၂ အမှားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် (Becker, 1, p ။ 2005) နှင့် (၂)” ဖြစ်နိုင်သည် အဆိုပါ [သုတေသီလေ့လာနေသည်ဆက်ဆံရေး၏ကွန်ယက်အတွက်ထိရောက်သောထက် extraneous အခန်းကဏ္ play] [[ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်လုပ်ပါတယ်လုပ်ခဲ့တတိယ variable တွေကို] ကစားပေမယ့် "ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီဝမ်းနည်းစရာသတိမထားမိဖြစ်ကြောင်း (Becker က et al ။ , 287, p ။ 2) ။
Kohut et al ။ (၂၀၂၀) တွင်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားနှစ် ဦး ၏လိင်စိတ်နှိမ့်ချမှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်းများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစာတမ်းများတွင်ပါ ၀ င်သောပုံစံများကိုသူတို့ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကအချက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်အခြားသူများကဲ့သို့ပင် (ခြွင်းချက်အနေဖြင့်၊ Tokunaga et al ။ , 2020 နှင့် Wright, 2019b)၊ သူတို့သည်မည်သည့်သီအိုရီကိုမှ၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုများအားဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်ဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ၎င်းတို့သည်ယခင်အလားအလာများ (Baer, ​​Kohut, & Fisher, 2020) ၏ယခင်လေ့လာမှုများ“ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရှုပ်ထွေးမှုများကိုတွက်ချက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း” (စ။ ၂) အကြောင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးကြိုတင်လေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသောအမျိုးမျိုးသော variable များကိုစာရင်းပြုခဲ့သည်။ (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်း (ဥပမာ - အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ ထကြွလွယ်သော၊ လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်အား) ။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသောကိန်းဂဏန်းများသည်ရာနှင့်ချီ။ အလွယ်တကူနံပါတ်ထွက်နေသဖြင့်စာရင်းထဲမှထိန်းချုပ်ထားသော variable ငါးခုကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပင်လယ်ကြားတွင်မည်သို့ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ကိုမရှင်းလင်းနိုင်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် Kohut et al ။ ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာကဏ္theirများကိုသူတို့၏ပါဝင်မှုသည်ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ခြင်းထက်ပိုမိုတိကျခိုင်မာသည့်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟူသောအငြင်းပွားမှုဖြင့်နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည် -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုတို့ကိုပူးတွဲသြဇာလွှမ်းမိုးသည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများ၏ခန့်မှန်းချက်များကိုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ” (စ။ ၃) ။ ဤ“ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ” သည်အမှန်တကယ်ဖျန်ဖြေသူများဖြစ်နိုင်သည်ဟုမဖော်ပြထားပါ။ (ဥပမာ - အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုတိုးပွားလာသည့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုကိုတိုးပွားစေခြင်း) သို့မဟုတ်မော်ဒကဲသမားများ (ဥပမာ - ထိုးထွင်းသိမြင်မှု - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ ထကြွလွယ်သောယောက်ျား။ Bernerth နှင့် Aguinis '(3) ၏' Stop variable 'ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်အကြံပြုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားခြင်းလည်းမရှိပါ။ မဟုတ် ပါဝင်မှုများအတွက်တစ်ခုတည်းသောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် (စ။ 1) "ယခင်သုတေသနဒီ variable ကိုနှင့် variable တွေကိုအကြားပင်ကိုယ်မူလဆက်ဆံရေးကိုတွေ့သောကြောင့်," (2) "ငါ့ယူဆချက်၏ရှေးရိုးစွဲသို့မဟုတ်တိကျခိုင်မာစွာစမ်းသပ်မှုများကိုပေးရန်" ဖြစ်စေ (273) ဖြစ်စေလျှင်ပါဝင်ဘို့တစ်ခုတည်းသောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးပါ။
သို့သော်ပြproblemနာရှိသော်လည်း၊ ဤအထူးလေ့လာမှုတွင်တိကျသောထိန်းချုပ်မှုများသို့မဟုတ်၎င်းတို့ပါဝင်မှုသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းမရှိသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်အားဤစာကိုရေးစေခဲ့သည်။ ငါဝန်ခံသကဲ့သို့, ငါတူညီတဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းပါပြီ။ ဖာဂူဆန်နှင့် Hartley (၂၀၂၀) မှမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့် meta-analysis နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သော Meta-analysis နှင့်ပတ်သက်သည့် Kohut et al ။ ၏ထုတ်ပြန်ချက်များသည် Wright et al ။ (Wright et al ။ , 2016) ဖြစ်သည်။ meta-analysis ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အရေးပါမှုသည်လေ့လာမှုတစ်ခုထက်သိသိသာသာကြီးသည်ဟုဖော်ပြသောဤဖော်ပြချက်များသည်အရေးအသားအတွက်အဓိကတွန်းအားဖြစ်သည်။
Kohut et al ။ (၂၀၂၀၊ စာမျက်နှာ ၁၅) ကျွန်ုပ်တို့၏ meta-analysis သည် 'bivariate (တတိယအကြိမ်ပြောင်းလဲမှုကိုချိန်ညှိမည့်အစား) ဆက်နွယ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်“ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော focal အသင်းအပင်းများ” ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ နှုတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်နှစ် ဦး စလုံး] ။ သူတို့“ Wright et al ။ ၏မြင့်တက်လာသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပမာဏအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုအားထားမှုကိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည်ထိန်းချုပ်မှု variable များကိုစနစ်တကျထည့်သွင်းတွက်ချက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းပိုမိုထင်ရှားသော meta-analytic တွေ့ရှိချက်များကသက်သေပြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု (Ferguson & Hartley, 2020) နှင့်အတူ” (စ။ ၁၆) ။
ပထမအချက်မှာ bvariate ဆက်နွယ်မှုများသည်“ ဖောင်းနေသော” ဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆမှာ covariate-adjustment ဆက်နွယ်မှုများသည်မေးခွန်း၏ဆက်နွယ်မှု၏သဘောသဘာဝကိုညွှန်ပြနေစဉ် Spector နှင့် Brannick (2011) သည်“ သန့်စင်ခြင်းနိယာမ” ဟုခေါ်ဝေါ်သောမှားယွင်းသောမှားယွင်းမှု၏ပုံဥပမာဖြစ်သည်။
စာရင်းအင်းထိန်းချုပ်မှုများကကျွန်ုပ်တို့အား“ သန့်စင်ခြင်းနိယာမ” ဟုခေါ်ဆိုမည့်အကျိုးစီးပွားပြောင်းလဲမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာပိုမိုတိကျသောခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟုအချည်းနှီးသောယုံကြည်ချက်သည်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေပြီးလက်တွေ့တွင်လက်ခံထားသောကြောင့်၎င်းသည်အတိုင်းအတာဆိုင်ရာမြို့ပြဒဏ္legာရီအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသုတေသီများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သူများကမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့်ချဉ်းကပ်မှု၏တရားဝင်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုပါ။ (စ။ ၂၈၈)
Meehl (၁၉၇၁) ကဤအချက်သည်မှားယွင်းသောအယူအဆကို ပြော၍၊ X → Y ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအသင်းအဖွဲ့:
ကျွန်ုပ်တို့သည်သီအိုရီကောင်းများကိုမှားယွင်းစွာစွန့်လွှတ်မည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောသောထူးဆန်းသည့်သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအတွေးအခေါ် တစ်ခုမှလွဲ၍ မဟုတ်ပါကမှားယွင်းသောမှားယွင်းမှုများပြုလုပ်ရန်အလားအလာရှိသောအခါနည်းစနစ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောကစားနည်းဟု သတ်မှတ်၍ မရပါ။ (စ။ ၁၄၇)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုသောသီအိုရီများ (ဥပမာ - ဂန္ထဝင်အေးစက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်လ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုများသုတေသနတွင်သန့်စင်ခြင်းနိယာမကိုဝမ်းနည်းစွာပျံ့နှံ့စေသောကြောင့်မှားယွင်းစွာစွန့်ခွာသွားသည်။
ဤသည်ဤထုတ်ပြန်ချက်များ၏ဒုတိယကံဆိုးဒြပ်စင်ကိုတိုက်ရိုက် segues ။ Kohut et al အရသိရသည်။ (2020) ဖာဂူဆန်နှင့် Hartley (2020) က "ထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုစနစ်တကျတွက်ချက်နေကြသည်" ။ Kohut et al အဖြစ်။ ဖာဂူဆန်နှင့်ဟတ်လေ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုသူတို့အဘယ်ကြောင့်“ သင့်တော်သောအရာ” ဟုအဘယ်ကြောင့်ယူမှတ်ရကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မရှင်းပြပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့အရင်းအမြစ်သို့တိုက်ရိုက်သွားရပါမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပြီးနောက် Kohut et al နှင့် ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးလာသည်။ ဖာဂူဆန်နှင့်ဟတ်တလီ၏ထိန်းချုပ်မှုစာရင်းကို“ သင့်လျော်သည်” ဟုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုများအကြောင်းတစ်ခုတည်းသောဖော်ပြချက်တွင်“ အကောင်းဆုံးသောလေ့ကျင့်မှုဆန်းစစ်ခြင်း” အညွှန်းကိန်းတွင်“ စိတ်ကျန်းမာရေး”၊ “ မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်” နှင့်“ ကျားမဆိုင်ရာ” ကိုချိန်ညှိထားသောလေ့လာမှုများကို“ ၁ မှတ်” (စ။ ၄) ပေးထားသည်။ တွေ့ရှိရသည့်အချက်မှာဖာဂူဆန်နှင့်ဟတ်လီတို့မှသူတို့၏ကြိုတင်မပြောရသေးသော၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောထိန်းချုပ်မှုများသည်သီအိုရီအရဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိရသည့်အချက်မှာသူတို့၏ meta-analysis တွင်အသုံးပြုသော“ standardised regression coefficients (βs”) ကို“ ရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုး (ဥပမာသီအိုရီအရသက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများအများဆုံးပါဝင်သော)” မှတွက်ချက်သည် (စ။ ၃) ။
ဖာဂူဆန်နှင့်ဟတ်လေ (၂၀၂၀) တို့သည်“ သီအိုရီအရဆက်စပ်မှုရှိသော” ထိန်းချုပ်မှုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်မည်သည့်သီအိုရီသို့မဟုတ်သီအိုရီများအကြောင်းကိုပြန်လှည့်မကြည့်မီ (သူတို့၏စာတမ်းတွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောသီအိုရီကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိ)၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် "အများဆုံးရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုး":
ကျွန်ုပ်တို့သည်များပြားလှသော CVs များ [control variable များ] သည် CVs နည်းပါးခြင်း (သို့) လုံးဝမပါဝင်ခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ တိကျခိုင်မာသည့်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သောဘုံရှုထောင့်မှချွင်းချက်ယူထားသည်။ ဤရှုထောင့်သည် CVs များထည့်ခြင်းဖြင့်ယူဆချက်ကို ပို၍ ရှေးရိုးစွဲစမ်းသပ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီးအကျိုးစီးပွားပြောင်းလဲမှုများအကြားစစ်မှန်သောဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်ဆိုသည့်မှားယွင်းသောယူဆချက်အပေါ်အခြေခံသည်။ (Becker et al ။ , 2016, p ။ 159)
များစွာသောသုတေသီများကထိန်းချုပ်မှုများထည့်သွင်းခြင်းသည်ရှေးရိုးစွဲဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီး၎င်းတို့ကိုချန်လှပ်ထားခြင်းထက်အမှန်တရားနှင့်နီးစပ်သောနိဂုံးချုပ်စေနိုင်သည်ဟုယူဆကြသည်။ Meehl (1971) ကမှတ်ချက်ပြုသကဲ့သို့, ဒီအလေ့အကျင့်ဝေးရှေးရိုးစွဲဝေးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာများစွာသောကိစ္စများတွင်အတော်လေးမဆင်မခြင်ဖြစ်ပါတယ်။ (Spector & Brannick, 2011, p ။ 296)
ထိန်းချုပ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကိုရပ်တန့်စေသင့်သည့်ဒုတိယအဖြေမှာရှေးရိုးစွဲ၊ တိကျခိုင်မာသော (သို့) တင်းကြပ်သောလေ့လာမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စာရင်းအင်းထိန်းချုပ်မှုများအပါအ ၀ င်ရှေးရိုးစွဲသို့မဟုတ်တိကျခိုင်မာစွာဘာမှမရှိပါဟုကောက်ချက်ချရန်လုံလောက်သောစုဆောင်းထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ (Meehl, 1971; Spector & Brannick, 2011) လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကပြသထားသောမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ (Bernerth & Aguinis, 2012, p ။ 2016)
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်ဖာဂူဆန်နှင့်ဟတ်လေ၏ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုစာရင်းအား“ ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှု = ပိုမိုတိကျသောရလဒ်” ဟူသောလမ်းညွှန်မှုမှ လွဲ၍“ သင့်လျော်သော” အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ကိုကောက်ချက်ချရန်ခက်ခဲသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဖာဂူဆန်နှင့် Hartley's (၂၀၂၀) မှသူတို့၏ meta-analysis တွင်ပါ ၀ င်သောထိန်းချုပ်မှုများသည်သီအိုရီအရဆင်းသက်လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချရသင့်မသင့်ဟူသောမေးခွန်းကိုပြန်ပြောပြသည်။ ငါဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, သူတို့ကသူတို့ထိန်းချုပ်မှုသူတို့ရဲ့အပြည့်အဝစာရင်းသို့မဟုတ်သူတို့ meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမူလတန်းလေ့လာမှုများတွင်ဤထိန်းချုပ်မှုကိုဖေါ်ထုတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သီအိုရီသို့မဟုတ်သီအိုရီများကိုမပေးကတည်းကငါငါတို့ meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဘုံလေ့လာမှုများကိုရှာဖွေ (Wright et al ။ မည်သည့်သီအိုရီသည်ဤမူလတန်းလေ့လာမှုများအတွက်ထိန်းချုပ်မှု၏ရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန်ဖို့အမည်ရှိခဲ့လျှင်ကြည့်ဖို့စကားလုံးများ "ထိန်းချုပ်မှု", "ရှုပ်ထွေး," "covariate," နှင့် "သီအိုရီ" အတွက်, 2020) ။ ငါဒီလေ့လာမှုများထိန်းချုပ်မှုသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန်ဖို့သီအိုရီကိုအသုံးပြု (မည်သည့်မြစ်ဆုံမော်ဒယ်သုတေသနအတွက်တတိယ variable တွေကို [ဥပမာ, Malamuth, Addison, & Koss, 2016] တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိန်းချုပ်မှုများအဖြစ်နှင့်အခြားအကြိမ်အဖြစ်စိစစ်အဖြစ်မော်ဒယ်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားမတှေ့ခဲ့ပေ။ ယခင်ကကိုးကားထိန်းချုပ်ထား variable ကိုနည်းလမ်းအားလုံး၏ဘုံထိန်းချုပ်မှု variable ကိုအသုံးပြုမှုများအတွက်သော့ချက် "အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်" သီအိုရီ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမပါပဲထိန်းချုပ်မှုများအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးအစား II အမှားများနှင့် / သို့မဟုတ်ပုံစံမှားယွင်းသတ်မှတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဒီကဘယ်ကသွားရမလဲ ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုမှစတင်ပါမည်
ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုတေသီများအနေဖြင့်“ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရှုပ်ထွေးမှုများ” အတွက်ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ထိန်းချုပ်နိုင်သောအမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်များ (ဥပမာ - Becker et al ။ , 2016; Bernerth & Aguinis, 2016; Spector & Brannick , 2011) ။ ယင်းတို့တွင်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မရှိသောရလဒ်များကိုအစီရင်ခံခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုများကိုအယူအဆများနှင့်သုတေသနမေးခွန်းများတွင်အတိအလင်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကိုမျှော်မှန်းထားသောတူညီသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုစံနှုန်းများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ငါ Becker et al ၏ # 1 အကြံပြုချက်ကြောင်း, သို့သော်, သတိပြုပါ။ (၂၀၁၆) မှာ“ သံသယဖြစ်လျှင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ” ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံသက်ရောက်မှုများကိုသုတေသီများသည်“ ဖြစ်နိုင်ခြေရှုပ်ထွေးသော” ပါရာဒိုင်းကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်“ ခန့်မှန်းသူများ၊ ဖြစ်စဉ်များနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေ” ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သောအရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်တတိယမြောက် variable များကိုဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များ၊ သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည့်အစား အကယ်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသီများသည်တတိယမြောက် variable များကိုအကြောင်းပြချက်ပုံစံများ၊ မီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို Slater's (2015) Reinforcing Spirals Model (RSM) နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
ရိုးရာမီဒီယာဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆန်းစစ်ခြင်းကအကြောင်းရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်စပ်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သကဲ့သို့အခြား variable များကိုများပြားစွာထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းရင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် RSM အနေဖြင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲမီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများအနေဖြင့်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုနှင့်လူမှုရေးလွှမ်းမိုးမှုများကဲ့သို့သောပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုလိမ့်မည်။ ထို့နောက်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများအားလုံးတွင်စုစည်းဖော်ပြသည့်အတိုင်းမီဒီယာအသုံးပြုမှု၏စုစုပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် RSM သည်ရိုးရာမီဒီယာဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မှုဖြစ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတတိယ variable များမဟုတ်သောယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်၊ မီဒီယာအသုံးပြုမှု၏အခန်းကဏ္။ ။ (စ။ ၃၇၆)
လူမှုရေးသိပ္ပံသည်လူတို့၏အပြုအမူကိုသိရှိရန်အခြားနည်းလမ်းများထက်အတည်မပြုနိုင်သောယူဆချက်များအပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုရိုးသားပါကကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများသည်ဘယ်သောအခါမျှမငြင်းနိုင်လောက်အောင်ခိုင်လုံသောအတည်ပြုခြင်း (သို့) အတုအယောင်များမှပညာရှင် ၁၀၀% ၏စိတ်ကျေနပ်မှုမှရရှိသည်ဟုအသိအမှတ်ပြုရမည်။ ။ ကျွန်တော့်ကို ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှိတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုငါမမွေးခင်ကသူမသုံးစွဲသူတွေကိုမထိခိုက်စေနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ငါထွက်သွားချိန်မှာလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ အတူတူ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်တစ် ဦး တည်းသောဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အဓိပ္ပါယ်များသည်သုညသက်ရောက်မှုမရှိခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုများ၊ သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုသည်အမြဲတမ်းအတုအယောင်ဖြစ်ပြီးအခြားလွတ်လပ်သောနှင့်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများရှိသည့်အကြောင်းအရင်း။ ငါဒီအမှုမဟုတ်ပါယူဆရန်လုံလောက်သောသီအိုရီဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အဲလ်ဆာအား“ မီးဖိုချောင်ထဲ၌နစ်မြုပ်ပြီးနောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးနောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ယခုထိတိုင် (ရလဒ်) ဆက်လက်တည်ရှိနေသေးသလား” ဟူသော“ တံခါးကိုဖွင့ ်၍ တံခါးကိုဆောင့်” ရန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ထပ်မံ၍ သံယောင်လိုက်သည်။ ချဉ်းကပ်နည်း။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အမျိုးအစား၊ ရလဒ်များကို ဦး တည်စေသောယန္တရားများနှင့်ထိုရလဒ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသောလူများနှင့်အခင်းအကျင်းများခွဲခြားသောတတိယမြောက် variable များကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်စေလိုသည်။
Baer, ​​JL, Kohut, T. , & Fisher, WA (2015) ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်မိန်းမဆန့်ကျင်ရေးလိင်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသလား။ တတိယ variable ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနှင့်အတူမြစ်ဆုံမော်ဒယ်ပြန်လည်။ ကနေဒါလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ 24, 160-173 ။ https://doi.org/10.3138/cjhs.242-A6.
Becker က, TE (2005) ။ အဖွဲ့အစည်းသုတေသနအတွက် variable တွေကို၏စာရင်းအင်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလားအလာပြproblemsနာများ: အကြံပြုချက်များနှင့်အတူတစ် ဦး ကအရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသုတေသနနည်းလမ်းများ၊ 8, 274-289 ။ https://doi.org/10.1177/1094428105278021.
Becker က, TE, Atinc, G. အ, Breaugh, ဂျေ, Carlson, KD, Edwards က, JR, & Spector, PE (2016) ။ ဆက်စပ်လေ့လာမှုများအတွက်စာရင်းအင်းထိန်းချုပ်မှု: 10 အဖွဲ့အစည်းသုတေသီများများအတွက်မရှိမဖြစ်အကြံပြုချက်များ။ အဖွဲ့အစည်းအပြုအမူ၏ဂျာနယ်, 37, 157-167 ။ https://doi.org/10.1002/job.2053.
Bernerth, JB, & Aguinis, အိပ်ချ် (2016) ။ ထိန်းချုပ်မှု variable ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်တစ် ဦး ကဝေဖန်သုံးသပ်ချက်နှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အကြံပြုချက်များ။ ဝန်ထမ်းရေးရာစိတ်ပညာ, 69, 229-283 ။ https://doi.org/10.1111/peps.12103.
ဘွန်း, BJ, Hefner, V. , & Drogos, KL (2009) ။ လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများ၊ လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလိင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေသည့်အလေ့အကျင့်များ။ လိင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု, 13, 32-50 ။ https://doi.org/10.1007/s12119-008-9041-y.
ကမ့်ဘဲလ်, အယ်လ်, & Kohut, တီ (2017) ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ စိတ်ပညာအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်, 13, 6-10 ။ https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.03.004.
Carlson, KD, & ဝူ, ဂျေ (2012) ။ စာရင်းအင်းထိန်းချုပ်မှု၏ထင်ယောင်ထင်မှား: စီမံခန့်ခွဲမှုသုတေသနထိန်းချုပ်မှု variable ကိုအလေ့အကျင့်။ အဖွဲ့အစည်းသုတေသနနည်းလမ်းများ, 15, 413-435 ။ https://doi.org/10.1177/1094428111428817.
ဖာဂူဆန်, CJ, & Hartley, RD (2020) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု - meta-analysis သည်အချိတ်အဆက်တစ်ခုကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသလား။ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု. https://doi.org/10.1177/1524838020942754.
Giano, Z. (2019) ။ အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: လိင်တူချစ်သူအထီးအထောက်အထားတွေကို၏ပုံဖော်။ လိင်တူချစ်ခြင်း၏ဂျာနယ်. https://doi.org/10.1080/00918369.2019.1667159.
Kohut, တီ, Landripet, ဗြဲ, & Stulhofer, အေ (2020) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးလိင်ကျူးကျော်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုပုံစံကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ ခရိုအေးရှားမှလွတ်လပ်သောဆယ်ကျော်သက်နမူနာနှစ်ခုအတွက်အကွာအဝေး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း. https://doi.org/10.1007/s10508-020-01824-6.
Malamuth, မိုင်, Addison, တီ, & Koss, အမ် (2000) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု။ လိင်သုတေသနနှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 11, 26-91 ။ https://www.sscnet.ucla.edu/comm/malamuth/pdf/00arsr11.pdf?wptouch_preview_theme=enabled ။
Meehl, P. (1971) ။ အထက်တန်းကျောင်းနှစ်ချုပ်စာအုပ် - Schwarz ၏အဖြေ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 77, 143-148 ။ https://doi.org/10.1037/h0030750.
Milas, G. အ, Wright, P. , & Stulhofer, အေ (2020) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုနှစ်ရှည်လများအကဲဖြတ်ခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 57, 16-28 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1607817.
O'Hara, RE, Gibbons, FX, Gerrard, M. , Li, Z. , & Sargent, JD (2012) ။ လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုထိတွေ့ခြင်းကအစောပိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်ပိုမိုများပြားလာခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, 23, 984-993 ။ https://doi.org/10.1177/0956797611435529.
ပယ်ရီ, SL (2017) ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်ဘာသာရေးကိုလျော့နည်းစေသလား။ Two- လှိုင်း panel ကိုဒေတာကနေအထောက်အထား။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 54, 214-226 ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1146203.
ပယ်ရီ, SL (2019) ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဘာသာရေးသုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 61, 57-74 ။ https://doi.org/10.1007/s13644-018-0355-4.
ပယ်ရီ, SL, & Hayward, GM က (2017) ။ ကြည့်ရှုခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသည်အမေရိကန်လူငယ်များ၏ဘာသာရေးဘ ၀ ကိုပုံသွင်းပေးသည်။ လူမှုတပ်ဖွဲ့များ, 95, 1757-1788 ။ https://doi.org/10.1093/sf/sow106.
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2006) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအွန်လိုင်းပစ္စည်းများနှင့်လိင်အပေါ်အပန်းဖြေသောသဘောထားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 56, 639-660 ။ https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00313.x.
Spector, PE, & Brannick, MT (2011) ။ အတိုင်းအတာများမြို့ပြဒဏ္:ာရီ: စာရင်းအင်းထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုများ၏အလွဲသုံးစားမှု။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသုတေသနနည်းလမ်းများ၊ 14, 287-305 ။ https://doi.org/10.1177/1094428110369842.
Stoolmiller, အမ်, Gerrard, အမ်, Sargent, JD, Worth, KA, & Gibbons, FX (2010) ။ R- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်အရက်စတင်ခြင်းတိုးတက်မှု - အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ, 11, 1-13 ။ https://doi.org/10.1007/s11121-009-0143-z.
Tokunaga, RS, Wright, PJ, & Roskos, JE (2019) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 45, 78-118 ။ https://doi.org/10.1093/hcr/hqy014.
Tokunaga, RS, Wright, PJ, & Vangeel, L. (2020) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်ကွန်ဒုံးမရှိသောလိင်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအရာလား။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 46, 273-299 ။ https://doi.org/10.1093/hcr/hqaa005.
Wright, PJ (2019) ။ လိင်လူမှုရေးနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ။ A. အ Lykins (Ed က။ ) ၌, လိင်နှင့်ကျားမ၏စွယ်စုံကျမ်း။ Cham, ဆွစ်ဇာလန်: Springer ။ https://doi.org/10.1007/978-3-319-59531-3_13-1.
Wright, PJ (2020a) ။ မီဒီယာနှင့်လိင်။ MB Oliver, AA Raney, & J. Bryant (။ ) ။ မီဒီယာသက်ရောက်မှု: သီအိုရီနှင့်သုတေသနတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ (စစ။ 227-242) ။ နယူးယောက်, NY: Routledge ။
Wright, PJ (2020b) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ - လိင်သဘောထားများကဖျန်ဖြေသလားသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသလား။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 47, 451-475 ။ https://doi.org/10.1177/0093650218796363.
Wright, PJ, & Bae, အက်စ် (2016) ။ အပြာစာပေနှင့်အထီးလိင်ဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေး။ YJ Wong & SR Wester (Eds ။ ) တွင် ယောက်ျားနှင့်ပုလ်၏စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ် (စစ။ 551-568) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်းမှ။
Wright, PJ, & Stulhofer, အေ (2019) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်း၏ဒိုင်းနမစ် - ပိုမိုမြင်ခြင်းက ပို၍ လက်တွေ့ကျသလား။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 95, 37-47 ။ https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.024.
Wright, PJ, & Tokunaga, RS (2018) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာ၊ လိင်၊ မိမိကိုယ်ကိုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု - သီအိုရီဆိုင်ရာမော်ဒယ်တစ်ခုဆီသို့အမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့၏အမျိုးသားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းနှင့်ကြည့်ခြင်း။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအသင်း၏ရာဇဝင်များ, 42, 35-53 ။ https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1412802.
Wright, PJ, Tokunaga, RS, & Kraus, အေ (2016) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လိင် - ကျူးကျော်မှု၏အမှန်တကယ်လုပ်ရပ်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်လူ ဦး ရေလေ့လာမှုများကို meta-analysis လုပ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်, 66, 183-205 ။ https://doi.org/10.1111/jcom.12201.
Wright, PJ, Tokunaga, RS, Kraus, အေ, & Klann, အီး (2017) ။ အပြာစာပေနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု။ Meta-analysis ။ လူ့ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 43, 315-343 ။ https://doi.org/10.1111/hcre.12108.